Booliska Magaalada Cadaado oo soo bandhigay Qamri badan +Sawirro | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Booliska Magaalada Cadaado oo soo bandhigay Qamri badan +Sawirro
Booliska Magaalada Cadaado oo soo bandhigay Qamri badan +Sawirro
Howl-gal ay sameeyeen ciidamada booliska degmada Cadaado ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen gaari nooca laan garuusalka ah oo siday waxyaabaha maanka dooriya kuwaasi oo ka koobnaa 124 dhalo oo qamri ah .
Taliyaha ciidanka Booliska magaalada cadaado Cali Maxamed Xasan (Cali dheere) ayaa sheegay inay hayeen xogta garigaan oo maalmahaanba ay kuraad jogeen ugu danbeena ay gacanta ku soo dhigeen garigan iyo darawalkii wadey.
“Xogta gaarigaan waan heynay waana ku raad joognay maalamahaan waxaana ciidanka booliska ka go’an inaan si adag ula dagaalanno waxyaabaha maanka dooriya oo mararka qaar ay ka dhashaan fal dambiyeed ayuu yiri Talliye Cali Dheere.
Gudoomiya degmada cadaado Cabdullaahi Cabdirraxmaan (Tootole) ayaa uga mahadceliyay ciidamada sida maalmahaan ay waxbadan uga bedeleen xaalada degmada waxaana u uku amaanay in guulo isdaba joog ah ay gaarayeen ciidanka.
“Todobaadyadii lasoo dhaafay waxaan arragnaa in hanaanka ay ku shaqeeyaan ciidanka booliska ay wax badan ka bedeleen maaxaa yeelaay waxaan arragnaa wax qabad muuqda ee dhinaca wada-shaqeynta ciidanka ,Bulshada iyo maamulka saree e magaalada waana bogaadineynaa.ayuu yiri Guddoomiye Tootole.
Maqaal horeSawirro: Axmed Madoobe oo la kulmay xildhibaanada ka soo jeeda Jubbaland
Maqaal XigaTaliska Booliiska oo war ka soo saaray Kufsi Gabar yar loogu geystay Muqdisho